Man United Oo Ilbidhiqsiyadii Ugu Danbeeyay Barbaro Qalbi Jab Ah Kala Kulantay Soutnampton, United Oo Kaalinta Saddexaad Looga Dhaartay Iyo Markii Lixaad Oo Ay Fursad Dahabi Ah Lumiyeen. - Gool24.Net
Man United Oo Ilbidhiqsiyadii Ugu Danbeeyay Barbaro Qalbi Jab Ah Kala Kulantay Soutnampton, United Oo Kaalinta Saddexaad Looga Dhaartay Iyo Markii Lixaad Oo Ay Fursad Dahabi Ah Lumiyeen.
Manchester United ayaa barbaro qalbi jab ah Old Trafford kula gashay kooxda Southampton waxayna United seegtay fursada ay kaalinta saddexaad ee Premeir League ugu soo fadhiisan lahayd.
Inkasta oo ay Man United laba gool ku badashay gool ay Southampton ku hormartay qaybtii hore ee ciyaarta ayay haddana Southampton goolkeeda labaad ee barbaraha keensatay ilbidhiqsiyadii ugu danbeeyay waxaana kaalinta saddexaad ee Man United burburiyay Michael Obafemi.
Haddii Man United ay kaalinta saddexaad ku soo galaysay guushii ay Southampton ka gaadhaysay ilaa daqiiqadii 95 aad waxay hadda baaqi ku sii ahaan doonaan kaalinta shanaad iyaga oo dhibco la wadaaga kooxda kaalinta afraad ku jirta ee Leicester City.
Manchester United ayaa u dagaalamaysay fursadii ay kaalinta saddexaad ugu soo fadhiisan lahayd laakiin kooxda Southampton ayaa bilawgii ciyaarta United ku abuurtay xaalad lama filaan ah.
DAQIIQADII 12 AAD Southampton ayaa Man United kaga nixisay goolka furitaanka kadib markii uu S. Armstrong dhaliyay goolka lama filaanka noqday ciyaarta xamaasada cajiika ah ku abuuray waxayna fursada goolkani ka timid kubbad uu Pual Pogba u lumiyay Ings waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Saints hogaanka kula wareegtay.
Man United ayaa markiiba jawaab adag ka bixisay goolka looga hor maray waxaana gool offside ah laga diiday Rashford daqiiqadii 17 aad balse jawaab celinta United ayaa sii socotay.
DAQIIQADII 20 AAD Man United ayaa ciyaarta dib ugu soo laabatay waxaana goolkan u saxiixay Marcus Rashford kadib markii uu caawin ka helay saaxiibkiisa weerarka ee Anthony Martial waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
DAQIIQADII 23 AAD Alla maxay waali ahayd! Man United ayaa saddex daqiiqo gudahood gabi ahaanba ku badashay natiijadii ay guuldarada ugu taagnayd waxayna u badashay guul kadib markii uu Anthony Martial uu goolka labaad ee United ku dhaliyay caawin uu ka helay xidiga xaaladii United badalay ee Bruno Fernandes.
Haddii Man United gool looga hayay hogaanka ciyaarta waxay markan awoodeen in ay 2-1 hogaanka natiijada ciyaarta dhinaca kale ugu dhigtay.
Qaybtii hore ee ciyaarta oo ahayd mid xiiso leh ayaa lagu kala nastay 2-1 ay United hogaanka ku haysay balse ay wali Southampton raadinaysay qaabkii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayd.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Man United doonaysay in ay goolka saddexaad ciyaarta ku disho laakiin Southampton ayaa baadi goob ugu jirtay fursad ay ciyaarta ugu soo laabto.
Daqiiqadii 64 aad Solskjaer ayaa ciyaarta ka saaray Pual Pogba wuxuuna kaydka ka soo kiciyay Fred halka Saints ay kaydka uga yeedheen Shay Long waxaana la saaray Adams.
Daqiiqadii 68 aad Marcus Rashford ayaa helay gool dhalin cadaan ah laakiin Bertrand ayaa sameeyay daboolis layaableh si uu kooxdiisa Saints uga joojiyo goolka niyadjabka ee ay United dhalin lahayd.
Daqiiqadii 75 aad Man United waxaa ka dhaawacmay Luke Shaw oo ciyaarta sii wadan kari waayay wuxuuna ka dhaawacmay canqowga waxaana booskiisa lagu buuxiyay da’yarka B. Williams.
Southampton ayaa markan bilawday in ay weeraro rogaal celis halis ah ku raadiso goolka barbaraha waxayna United wadnaha farta ugu haysay in ay hogaanka lumiso maadaama oo goolka saddexaad ay ku dhibtoonayeen in ay dhaliyaan.
Daqiiqadii 80 aad Martial ayaa si layaableh iskugu soo dhex yaaciyay ciyaartoyda Southampton wuxuuna u muuqday in uu dhalinayo goolka saddexaad ee United laakiin dhamaystirkii ayaa ka xumaaday markii uu shaqadii ugu badnayd uu soo qabtay.
Daqiiqadii 84 aad Solskjaer ayaa hal mar soo wada kiciyay McTominay iyo Daniel James kadib markii uu arkay Southampton oo kooxdiisa kubbada kala wareegtay wuxuuna saaray Bruno Fernandes iyo Mason Greenwood.
DAQIIQADII 86 AAD Alla maxay gool badbaadin ahayd! Nathan Redmond ayaa darbo layaableh waxa uu ku ganay goolka Man United isaga oo waliba xerada ganaaxa United ku jira laakiin kubbada shabaqa ruxi lahayd ayuu David De Gea si layaableh ku joojiyay.
DAQIIQADII 90+6 aad WAQTIGII QALBI JABKA! Southampton ayaa ugu danbayn ciyaarta ugu soo laabtay goolkeeda labaad ee barbaraha laakiin waqtiga uu goolkani yimid ayaa ahaa waqtigii ugu xumaa ee United ay gool la kulmi kartay.
Waxaa goolka kaalinta saddexaad ee Man United galaaftay dhaliyay Michael Obafemi oo ciyaarta waqti danbe badal ku soo galay wuxuuna goolkani noqday mid dhulka ku soo riday Man United waqti xaasaasi ah.
Ciyaarta ayaa noqotay barbaro 2-2 ah waxayna United aragtay rajadeedii cirka maraysay oo ay waqtigii ciyaarta ugu danbaysay lumisay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro 2-2 ah waana markii lixaad ee ay Man United ku fashilantay xili ciyaareedkan in ay ka faa’iidaysato guuldaro Chelsea soo gaadhay oo ay dhaafi kartay waxaana sii socotay nasiibka Blues ay wali kaalinta saddexaad ugu sii jiri doonto.
Jamaahiirta Chelsea ayaa la dabaal degay Southampton maadaama oo ay Blues baaqi ku sii tahay kaalinta saddexaad halka Leicester City ay kaalinta afraad ugu jirto farqiga goolasha laakiin United oo kaalinta saddexaad ku jirtay intii ay ciyaartani socotay ayaa kaalinta shanaad ugu dhacday goolka soo daahay ee Saints.
chalsae guul wacaan waligiin ka sareeya